Saliida CBD ma xoojisaa timahaaga? • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Saliida CBD ma xoojisaa timahaaga?
albaabka daroogada 2 May 2022
maqaal by daroogada 2 May 2022
Waxyaabaha timaha ee CBD waa isbeddel degdeg ah oo dhowaan soo galay suuqa qurxinta. Dumarka iyo ragga adduunka oo dhan waxay ka hadlayaan awoodda ay u leeyihiin inay yeeshaan timo dheer, adag iyo caafimaad wanaagsan. Saliidda Fayodhowrka ee CBDShaambooyinka iyo qaboojiyaha waxay u badan tahay inay sabab u tahay kala duwanaanta ballaaran ee faa'iidooyinka timaha iyo maqaarka madaxa ee saliidda CBD.
1 Waa maxay dhab ahaantii CBD?
2 Faa'iidooyinka saliidda CBD
3 Saliidda CBD faa'iido ma u leedahay timahaaga iyo madaxaaga?
4 Waa maxay waxtarka saliidda CBD ee timaha luminta?
5 Faa'iidooyinka isticmaalka CBD ee timaha
5.1 Waxay kor u qaadaa koritaanka timaha:
5.2 Timaha waa la xoojiyaa oo la ilaaliyaa:
5.3 Waxay hagaajisaa caafimaadka madaxa:
5.4 Waxay ilaalisaa qoyaanka timaha:
5.5 Waxay wanaajisaa barti timaha:
5.6 Ka hortag timaha jaban:
6 Ugu dambeyntii
Waa maxay dhab ahaantii CBD?
CBD waxay u gaaban tahay cannabidiol, oo laga helo xashiishadda. Maadaama cannabinoids ay si dabiici ah u joogaan jirka, saliidda CBD waxay si wax ku ool ah u daaweysaa cuduro iyo cuduro kala duwan. Nidaamka endocannabinoid jirkeena wuxuu si dabiici ah u nuugaa CBD, kaas oo ka caawiya maaraynta xanuunka, walbahaarka, hurdada iyo caafimaadka madaxa. Waxay kaloo gacan ka geysataa xakameynta shaqada endocrine iyo difaaca jirka ee jirkeena. Sidaa darteed, CBD waxay leedahay sifooyin badan oo faa'iido leh sida marijuana, laakiin maaha hallucinogen, markaa isticmaalayaashu ma dareemi doonaan dareenka "sare" sida caadiga ah ee la xidhiidha xashiishadda.
CBD-da laga soo saaro marijuana (HEMP) (warshad xashiishad ayaa ka kooban THC badan - "walxaha" ee kugu kordhinaya - iyo CBD ka yar) looma oggola dhammaan xukunnada. CBD oo laga soo saaro hemp (cannabis sativa) waxay bixisaa heerar sare oo CBD ah oo aan lahayn wax THC ah, taasoo ka dhigaysa gabi ahaanba mid aan nafsiyan ahayn, taasoo la macno ah inaysan ku kordhin doonin.
Faa'iidooyinka saliidda CBD
Saliidda CBD waxay bixisaa faa'iidooyin dhowr ah oo la xaqiijiyay, oo ay ku jiraan xanuunka iyo dhimista bararka iyo kor u qaadista dareenka fayoobaanta iyo xasilloonida. Intaa waxaa dheer, dad badan ayaa ogaanaya kororka feejignaanta maskaxda iyo waxqabadka garashada marka ay isticmaalayaan CBD.
Saliidda CBD faa'iido ma u leedahay timahaaga iyo madaxaaga?
Timaha waxay ka kooban yihiin keratin, qiyaastii 18-23 amino acids, iyo cysteine ​​​​disulfide. Cysteine ​​​​disulfide wuxuu keenaa atomiyada sulfur si ay u abuuraan qaabdhismeed xooggan oo loo yaqaan buundooyinka disulfide, iyo cadadka amino acids iyo buundooyinka disulfide waxay saameeyaan muuqaalka timaha.
Saliidda CBD waxay ka kooban tahay dhammaan asiidhyada amino ee la yaqaan, blocks-ka dhismaha borotiinka. Natiijo ahaan, CBD waxay ka caawisaa sameynta kolajka iyo elastin, labaduba waxay lagama maarmaan u yihiin xoogga timaha. Natiijo ahaan, saliidda CBD waxay yaraynaysaa timaha jebinta waxayna xitaa ka caawisaa timaha inay u muuqdaan kuwo dhumuc weyn oo buuxa iyadoo ka caawinaysa timaha inay dhisaan borotiinno adag.
Intaa waxaa dheer, saliidda CBD waxay qani ku tahay antioxidants sida fiitamiinada A, C iyo E. Saddexdan antioxidants ayaa helay dareenka ugu badan sababtoo ah waxay naga ilaaliyaan xagjirnimada xorta ah. Si kale haddii loo dhigo, maadada fiitamiinka ee CBD waxay timaha ka ilaalisaa waxyeelada dibadda, sida qallayl iyo qallafsanaan.
Saliidda CBD waxay sidoo kale hodan ku tahay asiidhyada dufanka muhiimka ah, oo ay ku jiraan omega-3, -6, iyo -9, kuwaas oo gacan ka geysta dhimista luminta qoyaanka iyo ilaalinta timaha. Intaa waxaa dheer, mid kale oo ka mid ah acids amino ee saliidda cannabis, tyrosine, waxay caawisaa ilaalinta midabka timaha. Si kastaba ha noqotee, qaabdhismeedka molecular yar ee omega-3-6-9 fatty acids ee CBD ayaa ka duwan kuwa kale.
CBD waxay samaynaysay mowjado adduunka isqurxinta faa'iidooyinkeeda maqaarka ee cajiibka ah, madaxaagana kama reebo. Saliidda CBD ayaa aad ugu fiican marka ay timaado caafimaadka madaxa. CBD waxay gacan ka geysataa dib-u-soo-nooleynta maqaarka waxayna ka caawisaa madaxa in ay ilaaliso waxyaabaha lagama maarmaanka u ah timaha caafimaadka, sida wareegga dhiigga oo la taaban karo iyo ka adkaanta maqaarka maqaarka iyo nabarrada ama cuncunka timaha. Sida laga soo xigtay dhakhaatiirta, CBD ayaa runtii la xaqiijiyay inay kiciso koritaanka timaha. Sidaa darteed, isticmaalka CBD waxay faa'iido u yeelan kartaa dadka ay tahay inay timuhu soo noqdaan ama dhuuban.
Waa maxay waxtarka saliidda CBD ee timaha luminta?
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista hadda Faa'iidooyinka CBD ee timaha dib u koraan waxay ku xiran yihiin qiyaasta. Tusaale ahaan, isla daraasaddan 2021, 3 ilaa 4 mg oo CBD ah maalintii lix bilood waxay kordhisay korriinka timaha 93,5%. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah cilmi-baaris badan oo ku saabsan mawduucan, natiijadu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran qofka, sababta timaha daataan, qaan-gaarnimada, jinsiga, iyo arrimo kale. Guud ahaan, saliidda CBD waxaa laga yaabaa inaysan faa'iido u lahayn timaha luminta.
Daraasadda 2021, sida kor ku xusan, kaliya waxay wax ka qabatay saameynta CBD marka si toos ah loo maamulo madaxa. Intaa waxaa dheer, ma jiraan xog ku filan marka aan ku dhejino qaboojiyaha iyo shambooyinka.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, saliidda CBD waxay ka caawin kartaa dib-u-soo-nooleynta timaha ka dib markii timaha daataan maadaama CBD-ga hodanka ah ee hemp-ka-soo-saarka saliidda qaada ay kor u qaadi karto koritaanka timaha waqti ka dib. Tusaale ahaan, cilmi-baaris la sameeyay 2021 ayaa lagu ogaaday in dadka saliidda CBD ku dul marsan timaha iyo madaxa muddo lix bilood ah ay arkeen dib u koritaan guul leh, iyadoo ragga ay ka sarreeyaan dumarka.
CBD waxay sidoo kale ka caawin kartaa dadka inay si fiican u seexdaan waxayna yareeyaan walaaca, taas oo saameynaysa koritaanka timaha. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah walbahaarka ayaa ah sababta ugu weyn ee kor u kaca timaha, dhimista diiqada maalinlaha ah waxay saameyn kartaa cusboonaysiinta timaha timaha. Si kastaba ha noqotee, CBD maaha jawaab diyaar ah. Iyadoo saliidda CBD ay ka caawin karto timaha luminta, waxaa jira habab kale oo dib u soo kabashada timaha kuwaas oo bixiya saameyn joogto ah.
Faa'iidooyinka isticmaalka CBD ee timaha
Waxay kor u qaadaa koritaanka timaha:
Saliidda CBD waxay ka kooban tahay borotiinno, fiitamiinno iyo macdan badan. Qalabkan ayaa la ogaaday in ay kor u qaadaan horumarka timaha ee dad badan iyada oo qoyaanka iyo qaboojinta timaha, ka dhigaya kuwa xoog badan, dhumucdiisuna tahay oo ka sii fiican tahay, caawinta timaha daadinta, hagaajinta timaha khafiifka ah iyo kordhinta caafimaadka.
Timaha waa la xoojiyaa oo la ilaaliyaa:
Sababtoo ah timuhu waxay inta badan ka kooban yihiin borotiinno, dhakhaatiirtu waxay qoraan daaweynta borotiinka ee timaha dhuuban, dhaawacan. Saliidda CBD waxay ka kooban tahay nafaqooyin lagama maarmaan u ah iyo borotiinnada dhismaha ee lagama maarmaanka u ah koritaanka timaha. Waxay kaa caawin kartaa inay timahaaga ka dhigaan kuwo dhumuc iyo xoog badan haddii si joogto ah loo qaato maadaama ay ka kooban yihiin antioxidants sida fiitamiinada A, C iyo E.
Waxay hagaajisaa caafimaadka madaxa:
Saliidda CBD waxay qani ku tahay calcium, fosfooraska, magnesium, potassium iyo vitamin E, kuwaas oo faa'iido u leh madaxa. Sidoo kale waa anti-bararka dabiiciga ah, oo ku habboon xaaladaha madaxa ee caadiga ah sida psoriasis ama folliculitis. Waxaa dheer, waxay nidaamisaa wax soo saarka sebum (ama saliidda) madaxaaga, haddii ay aad u badan tahay ama midna. CBD waa modulator, taasoo la macno ah inay dheellitirto wax soo saarka sebum, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon timaha saliidda leh, qalalan ama caadiga ah. Waxay ka caawisaa daawaynta maqaarka qalalan, qallafsan, cambaar iyo cudurka psoriasis.
Waxay ilaalisaa qoyaanka timaha:
Noocyada qoyaanka leh ee saliidda hemp waxay ka faa'iideysan karaan xididdada iyo madaxa labadaba, abuurista jawi ku habboon koritaanka timaha.
Waxay wanaajisaa barti timaha:
Korodhka dabacsanaanta, mugga iyo dhalaalka ayaa inta badan lagu ogaadaa lipids ee saliidda CBD.
Ka hortag timaha jaban:
Marka timuhu qoyaanka ka baxaan, way guban karaan oo way jajabi karaan. Saliidda CBD waxay caawisaa inay ilaaliso qaab dhismeedka dabiiciga ah ee timaha iyada oo yaraynaysa daadinta biyaha iyo qoyaan timaha iyo madaxa.
Isticmaalka saliidda CBD ee alaabta daryeelka timaha waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay meelaha engegan ee timuhu si dhakhso ah u lumiyaan qoyaanka. Si aad u wanaajiso faa'iidooyinka, dooro saliid CBD oo laga soo saaray hemp oo adeegsata astaanta dhirta oo buuxda halkii aad isticmaali lahayd Saliid CBD kaas oo laga helo abuurka hemp.
Nolosha mashquulka ah ee wakhtigan casriga ah ayaa culays badan saartay dabacsanaanta timaha oo sababa dhibaatooyin kala duwan oo timaha la xidhiidha. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka maalinlaha ah ee cunto caafimaad leh iyo CBD waxay hagaajin kartaa caafimaadka timaha waxayna siin kartaa faa'iidooyin la taaban karo, sidoo kale waxay horseedaysaa gabagabadayada in saliidda CBD ay ka caawiso xoojinta timahaaga xididka. Si kastaba ha ahaatee, tixgeli inaad kala hadasho dhakhaatiirta ka hor inta aanad codsan natiijooyin wanaagsan.
saliid cbdcaafimaadkacilmi baaris
Satipharm waxay soo bandhigtay noocyo cusub oo CBD ah oo horumarsan oo leh fitamiino ...
Saynis yahanadu waxay ka shaqaynayaan hab hufan oo ay...
Ka hor-Christmas-ka iibinta wax soo saarka marijuana ilaa 53%